Liyini Idumela Lekheli le-IP Futhi Amaphuzu Wakho we-IP Athinta Kanjani Ukulethwa Kwe-imeyili Yakho? | Martech Zone
Uma kukhulunywa ngokuthumela ama-imeyili nokwethula imikhankaso yokuthengisa ngama-imeyili, inhlangano yakho Amaphuzu we-IP, noma Idumela le-IP, kubaluleke kakhulu. Eyaziwa nangokuthi i- isikolo somthumeli, idumela le-IP lithinta ukulethwa kwe-imeyili, futhi lokhu kubalulekile emkhankasweni we-imeyili ophumelelayo, nasekuxhumaneni kabanzi.
Kulesi sihloko, sihlola izikolo ze-IP ngokuningiliziwe futhi sibheka ukuthi ungaligcina kanjani idumela le-IP eliqinile.
Liyini i-IP Score noma Idumela le-IP?
Isikolo se-IP yisikolo esihambisana nedumela lekheli le-IP lokuthumela. Kuyasiza abahlinzeki bezinsizakalo ukuthi bahlole ukuthi i-imeyili yakho iyenza idlule isihlungi sogaxekile noma cha. Amaphuzu akho e-IP angashintsha kuye ngezici ezahlukahlukene, kufaka phakathi izikhalazo zabemukeli nokuthi uthumela ama-imeyili kaningi kangakanani.
Kungani Idumela le-IP Libalulekile?
Isikolo se-IP esiqinile sisho ukuthi ubhekwa njengomthombo othembekile. Lokhu kusho ukuthi ama-imeyili akho azofinyelela kubamukeli bakho abahlosiwe futhi umkhankaso wakho we-imeyili ngakho-ke unethuba elikhulu lokusebenza ngempumelelo. Ngakolunye uhlangothi, uma ikhasimende lakho livame ukubona ama-imeyili avela enhlanganweni yakho kufolda yawo yogaxekile, ingaqala ukukhuthaza isithombe esingesihle senkampani, esingaba nomthelela wesikhathi eside.
Ingabe Idumela Lakho le-IP Likuthinta Kanjani Ukulethwa Kwe-imeyili?
Idumela le-IP lomthumeli liyingxenye yenqubo yokunquma ukuthi i-imeyili ifinyelela ifayela le- Ibhokisi lokungenayo noma ifolda yogaxekile. Isithunzi esingesihle sisho ukuthi ama-imeyili akho angamakwa njengogaxekile, noma kwezinye izimo avele enqatshwe ngokuphelele. Lokhu kungaba nemiphumela yangempela enhlanganweni. Uma ufuna ukuzethemba ekulethweni kwama-imeyili akho, ukugcina idumela lomthumeli eliqinile kubaluleke kakhulu.
Uyini umehluko phakathi kwekheli le-IP elizinikezele nekheli le-IP elabiwe?
Ungamangala ukwazi ukuthi iningi labahlinzeki bensizakalo ye-imeyili abahlinzeki ngefayela le- Kunikezelwe Ikheli le-IP lama-akhawunti abo. Ngamanye amagama, i-akhawunti yakho yokuthumela iyi- okwabelwana kuma-akhawunti amaningi we-imeyili. Lokhu kungaba kuhle noma kubi ngokuya ngedumela lekheli le-IP:
Alikho Idumela le-IP - Ukuthumela ivolumu enkulu yama-imeyili kukheli elisha le-IP elingenalo idumela kungenzeka ukuthi kuvimbele ama-imeyili akho, kuhanjiswe kufolda engenamsoco… noma kuvinjelwe ikheli lakho le-IP ngokushesha uma kukhona obika i-imeyili njengoGaxekile.
Idumela le-IP elabiwe - Idumela lekheli le-IP elabiwe akuyona into embi. Uma ungeyena umthumeli omkhulu we-imeyili futhi ubhalisela i-akhawunti nomhlinzeki wesevisi we-imeyili onedumela elihle, bazoxuba ama-imeyili akho nabanye abathumeli abaziwayo ukuqinisekisa ukuthi i-imeyili yakho ilethwa kahle. Vele, ungangena enkingeni ngensizakalo engadumiseki kakhulu evumela ukuthi u-SPAMMER athumele kukheli elifanayo le-IP.
Idumela le-IP elizinikezele - Uma ungumthumeli omkhulu we-imeyili… uqobo lwababhalisile abayi-100,000 ngokuthumela ngakunye, ikheli le-IP elizinikele kungcono kakhulu ukuqinisekisa ukuthi uyakwazi ukulondoloza isithunzi sakho. Noma kunjalo, amakheli e-IP adinga ukufudumeza… Inqubo lapho uthumela abahlinzeki abathile be-Inthanethi ivolumu ethile yababhalisile bakho ababambe iqhaza isikhathi esithile ukufakazela i-ISP onedumela elihle kuyo.
Uqinisekisa Kanjani Igama Eliqinile le-IP?
Kunezici ezahlukahlukene uma kukhulunywa ngokunquma nokugcina idumela lakho le-IP. Ukuvumela amakhasimende ukuthi azikhiphe ohlwini kalula kuma-imeyili akho uma efuna isinyathelo esisodwa ongasithatha; lokhu kuzonciphisa izikhalazo zogaxekile mayelana nama-imeyili akho. Bhekisisa ukuthi mangaki ama-imeyili owathumelayo nokuthi uwathumela kangaki futhi - ukuthumela amaningi kakhulu ngokulandelana okusheshayo kungalimaza idumela lakho le-IP.
Esinye isinyathelo esiwusizo ukuqinisekisa uhlu lwakho lwe-imeyili ngokusebenzisa indlela yokungena noma ngokususa njalo amakheli e-imeyili aqhamuka ohlwini lwakho lwamakheli. Umphumela wakho oqondile uzohlala ushintsha ngokuhamba kwesikhathi, kepha ukuthatha lezi zinyathelo kuzokusiza ukuthi uhlale uqine ngangokunokwenzeka.
Ngabe Ulakha Kanjani Idumela Eliqinile Nomthumeli Omusha?
Noma ngabe uthumela imiyalezo ngobuningi ngeseva yakho yeposi, noma ubhalisele uMhlinzeki Wensizakalo ye-imeyili omusha, Ukufudumeza i-IP yizinqubo odinga ukuzenza idumela lokuqala, eliqinile lekheli lakho le-IP.
Funda Kabanzi Mayelana nokufudumala kwe-IP
Amathuluzi Wokubheka Idumela le-IP
Isoftware ehlukahlukene isiyatholakala evumela ukuthi wena uhlole kalula idumela lakho le-IP; ungakuthola kulusizo ngaphambi komkhankaso wokumaketha ngobuningi. Enye isoftware inganikeza nokuhola ngezindlela zokuthuthukisa isikolo sakho somthumeli njengoba uya phambili. Nazi ezimbalwa ukuze uqalise:
SenderScore - I-SenderScore ye-Validity iyisilinganiso sedumela lakho, ebalwa kusuka ku-0 kuye ku-100. Ukuphakama kwesikolo sakho, kukhulisa idumela lakho, futhi ngokujwayelekile kukhuphuka amathuba okulethwa kwe-imeyili yakho ebhokisini lokungenayo kunafolda engenamsoco. I-SenderScore ibalwa ngokujwayelekile kwezinsuku ezingama-30 futhi ifaka ikheli lakho le-IP kwamanye amakheli we-IP.
I-BarracudaCentral - Amanethiwekhi weBarracuda ahlinzeka ngokubheka ukubonwa kwe-IP nesizinda ngeSistimu Yabo Yegama LaseBarracuda; i-database yesikhathi sangempela yamakheli we-IP ane abampofu or okuhle izincomo.
Umthombo Othenjwayo - Eqhutshwa nguMcAfee, iTrustedSource inikeza imininingwane kuma-imeyili wesizinda sakho kanye nedumela lewebhu.
Amathuluzi Womphathi We-Google - I-Google inikezela ngamathuluzi ayo oPosi kubathumeli abakuvumela ukuthi ulandelele idatha ngevolumu yakho ephezulu oyithumela ku-Gmail. Banikezela ngemininingwane kufaka phakathi idumela le-IP, idumela lesizinda, amaphutha wokulethwa kwe-Gmail, nokuningi.
IMicrosoft SNDS - Ngokufana Namathuluzi Womposi We-Google, iMicrosoft inikeza insizakalo ebizwa ngokuthi Izinsizakalo ze-Smart Network Data (SDNS). Phakathi kwemininingwane enikezwe yi-SNDS ukuqonda amaphuzu wamadatha afana nedumela lakho lokuthumela i-IP, zingaki izingibe zogaxekile ze-Microsoft ozilethela zona, nezinga lesikhalazo sakho sogaxekile.
ICisco Senderbase - Idatha yokusongela yesikhathi sangempela ku-IP, isizinda, noma amanethiwekhi ukukhomba Ugaxekile nama-imeyili amabi athunyelwe
Uma udinga usizo olwengeziwe ngedumela le-IP yenhlangano yakho noma ukulethwa kwe-imeyili, xhumana nathi ukuthola eminye imininingwane.
Tags: amanethiwekhi we-barracudaumhlinzeki wesevisi ye-imeyiliespamathuluzi oposi we-googleukubekwa kwebhokisi lokungenayoumhlinzeki wesevisi ye-inthanethiikheli le-ipIdumela lekheli le-IPAmaphuzu ekheli le-IPip idip amaphuzuispithumescoreinsizokuhleukufaneleka